WordPress: Mandefa WordPress mandeha ho azy | Martech Zone
WordPress: Navoaka mandeha ho azy ny WordPress
Alarobia, Febroary 21, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Betsaka amin'ireo bilaogy novakiako no navoaka isaky ny mivoaka ny fanavaozana ny WordPress. Tena somary manelingelina ihany izany fa tiako ny zava-misy fa olona maro no miahiahy ary te hamoaka haingana ilay teny. Raha iray amin'ireo mpamaham-bolongana tia manohana azy ianao dia aza misahirana manoratra lahatsoratra iray - asaivo ampidirin'ny WordPress ho azy amin'ny bilaoginao amin'ny alàlan'ny mailaka!
Ity no fomba:
Manangana adiresy mailaka tena sarotra be ho an'ny kaontinao izay tsy hisy hieritreritra haminavina.
Amboary ny mailaka amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny WordPress miaraka amin'io adiresy mailaka io sy ny mombamomba anao POP hafa:
Misoratra anarana amin'ny fampandrenesana famotsorana miaraka amin'io adiresy mailaka io ao amin'ny WordPress:
Voila! Ankehitriny WordPress dia handefa fampandrenesana famoahana mivantana amin'ny lahatsoratra amin'ny tranokalanao!
UPDATE: Azonao atao ny manampy fehezan-dalàna sasany hanoloana izay rehetra mety hanondro ny adiresy mailaka na ny rohy fisoratana anarana. Mbola tsy nahazo iray tamin'ireo mailaka ireo aho… fa ho hitako ny fomba hanaovana izany raha vao voaray ny voalohany.
WordPress Plugin: PostPost (Nohavaozina)
28 Feb 2007 tamin'ny 12:52 maraina
Hevitra tsara. Ankoatr'izay, fantatro tsara fa io hevitra fandefasana amin'ny mailaka ho an'ny WordPress dia tsy mandeha tsara.
Ka afaka manoro ny BlogMailr aho
Mety tsara ity raha ny hita amin'ny lahatsoratro.